Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Maninona ny fizahantany no anisan'ny olana COVID-19?
Aogositra 3, 2020
COVID-19 sy fizahan-tany
Home » Lahatsoratra » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Maninona ny fizahantany no anisan'ny olana COVID-19?
Ny COVID-19 dia niseho voalohany tamin'ny efijery radar sinoa tamin'ny faran'ny volana desambra 2019 ary nanjary ampahan'ny dinika eran-tany tamin'ny fiandohan'ny taona 2020. Nanambara ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) fa areti-mandringana io virus io tamin'ny 12 martsa 2020, ary nanomboka teo ny otrikaretina dia nanohina ny lafiny rehetra amin'ny toekarena eran'izao tontolo izao, anisan'izany ny fetra ara-pahasalamana, ny politika, ny governemanta, ny rafitra sosialy-kolontsaina, ny fambolena, ny toetrandro, ny fivavahana, ny fialamboly, ny fandraisam-bahiny, ny fitsangatsanganana ary ny fizahantany.
Maherin'ny 17.2 tapitrisa ny olona voan'ny aretina Covid-19 ary mihoatra ny 10 tapitrisa ny marary sitrana; 673,000 XNUMX farafahakeliny no maty, araka ny tatitra avy amin'ny John Hopkins University.
Ratsy ary miharatsy kokoa
Hatramin'ny volana aprily, 2020, ny fanidiana ny orinasa, natao hamerana ny fivezivezena sy ny fihanaky ny viriosy dia niantraika tamin'ny 81 isan-jaton'ny mpiasa manerantany (ILO, 2020), ary ny fiatraikany amin'ny indostrian'ny fizahantany manerantany dia lalina tokoa tamin'ny fahaverezan'ny fahavoazana 100.8 tapitrisa asa. Ny faritra vinavinaina hahita ny fatiantoka lehibe indrindra avy amin'ny COVID-19 dia ny faritr'i Azia Pasifika, very asa sahabo ho 63.4 tapitrisa, raha i Eropa kosa no handray ny laharana faharoa amin'ny fahaverezan'ny asa 13 tapitrisa (www.statista.com/statistics/1104835/coronavirus-travel-tourism-employment-loss/).
Tombanana hidina 78 isan-jato ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena amin'ny faran'ny taona 2020, miteraka fatiantoka mihoatra ny 1.2 tapitrisa dolara amerikana azo avy amin'ny fizahan-tany avy amin'ny fizahan-tany ary 120 tapitrisa ny fanapahana asa fizahan-tany mivantana izay miseho im-pito ny vokatry ny 11 septambra, ary ny fihenana lehibe indrindra. eo amin'ny tantara (UNWTO 2020).
Ny fiatraikany dia nanery ny fanovana ara-kolontsaina - miainga amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina sy ny fandrakofana ny fandrarana amin'ny fivezivezena sy ny fivezivezena, ny fanidiana ny fiaraha-monina sy ny fampielezan-kevitra ao an-trano, ny fanaovana quarantine na fanokanan-tena. Voafetra ny haben'ny vahoaka / vondrona ary misy ny fametrahana iraisampirenena momba ny fiarovana sy ny fidiovana.
Ny indostrian'ny hotely, fitsangantsanganana ary fizahan-tany dia tsy afa-bela tamin'ny zava-nitranga ara-tantara. Manomboka amin'ny aretina (Ebola, SARS ary Zika) ka hatramin'ny fampihorohoroana (9/11), ary hatramin'ny horohoron-tany (Mexico sy Haiti) ka hatrany amin'ny fiakaran'ny maripana (Greenland sy Maldives); na izany aza, ny COVID-19 dia manolotra fanamby vaovao ary toa lalina sy maharitra ny fiatraikany, manova an'izao tontolo izao ho lasa rafitra sosialy sy toekarena vaovao.
Satria ny COVID-19 dia manaparitaka làlana vaovao, manova ny soatoavina sy ny rafitra an'izao tontolo izao, isika koa dia mandeha mankany amin'ny fitotonganana manerantany sy ny fahaketrahana manerantany. Ity aretina ity dia lehibe kokoa sy ratsy kokoa noho ny zavatra niainana taloha ary ny hotely, fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia tsy vonona ary tsy te hanaiky ny zava-misy fa izy io (ary) ampahany amin'ny olana amin'ny areti-mandoza ary manao izay fara heriny mba hisorohana ny andraikiny, tsy raharahiana ny olana sy fanamby izay, amin'ny alàlan'ny fampidirana vokatra vaovao, teknolojia ary serivisy, dia mety hiteraka indostria vaovao sy tsara kokoa, miorina amin'ny fihodinan'ny toekarena.
Manomboka amin'ny Baby Boomers ka hatrany amin'ny Gen Z, manomboka amin'ny tokan-tena ka hatrany amin'ny fianakaviana dia apetraka amin'ny mpamaky lamosina ny fotoana ahafahanao mandeha lavitra noho ny FAHATAHOTRA: tahotra sao voan'ny coronavirus, tahotra ny tsy fahampian'ny vola, tahotra sao ho karamaina mandritra ny 2 herinandro, ary tahotra ny ho very asa (na efa noroahina na nodidiana). Ny tebiteby mifandraika amin'ny dia dia tohanan'ny CDC, “Mampitombo ny fahafahanao mahazo sy manaparitaka ny Covid-19 ny dia. Tsy fantatray raha karazana fitsangatsanganana iray no azo antoka kokoa noho ny hafa; na izany aza, seranam-piaramanidina, fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, fiantsonan'ny fiaran-dalamby ary fijanonana fitsaharana no toerana rehetra mety ahitan'ny mpandeha an'io virus io amin'ny rivotra sy eny ambonin'ny habakabaka.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-in-the-us.html). Na i Dr. Anthony Fauci, talen'ny Ivon-toerana Nasionalin'ny Allergy sy ny Areti-mifindra ao amin'ny National Institutes of Health dia nilaza tamin'ny Market Watch fa mampidi-doza izao ny manidina.
Ny hotely, tompona trano fisakafoanana ary mpamatsy fidinana an-dafy eran'izao tontolo izao dia mitaraina noho ny tsy fisian'ireo mpitsidika, manisa ny fatiantoka miditra, mitentina amina miliara dolara, Euro, kilao sns.
Nahazo fanantenana i Espana amin'ny famonjena ny fahavaratra, ary natsipy tao anaty rambony izy rehefa nametraka quarantine tapa-bolana ho an'ireo mpizahatany niverina avy any Espana ny governemanta UK ary nesoriny ho toerana manintona ho an'ny Brits. Ny mpizahatany anglisy dia manana 20 isan-jaton'ny mpitsidika vahiny rehetra any Espana. Teo anelanelan'ny Janoary sy Jona 2020, very 50 isan-jaton'ny trano fandraisam-bahiny ity firenena ity. Hatramin'ny 12 isan-jaton'ny harinkarena ny fizahantany, ary very 5 tapitrisa Euros isan-kerinandro ny sehatra nanomboka ny volana martsa, trano fisotroana sy trano fisakafoanana 40,000 85,000 no nakatona mandrakizay miaraka amina risika XNUMX hafa - raha misy onjan'ny virus faharoa. .
Ny fizahan-tany any Italia dia maneho ny 13 isan-jaton'ny harin-karena faobe ary ity sehatra toekarena ity dia nihena hatramin'ny 80 isan-jato - na dia nisokatra ho an'ny fizahan-tany aza ny sisintany hatramin'ny Jona. Ireo mpitsidika avy any Alpes mankany Sisily ary Sardinia dia tsy manamboatra ny tsy fisian'ireo mpizahatany any ivelany izay tsy afaka soloina. Tombanana ho 75-80 isan-jato ny isan'ireo mpitsidika vahiny any Italia amin'ity fahavaratra ity (Confcommercio). Namoaka torohevitra momba ny dia ho an'i Espana i Alemana, amin'ny fahazoan-dàlana hanohitra ny fitsangatsanganana any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Catalonia, Aragon, ary Navarra. Norveziana dia nitarika quarantine 10 andro ho an'ireo olona niverina avy amin'ny Saikinosy Iberia iray manontolo ary namporisika ny olom-pireneny tsy hitsidika an'i Catalonia i Frantsa.
Ny torapasika any Italia dia tsy foana foana satria Italiana an-tapitrisany no mandany ny fahavaratra any amin'ireo toeram-pialantsasatra malaza; na izany aza, ny Italiana dia tsy mandany vola betsaka tahaka ny amerikana, sinoa ary mpizahatany iraisam-pirenena hafa. Ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana ary fivarotana enta-madinika manamorona ny morontsirak'i Amalfi dia nahitana fihenan'ny fidiram-bolany 40-70 isan-jato.
Nihena 50 isan-jato ny fizahan-tany any Kroasia ary 20 isanjaton'ny toekarena ity indostria ity. Andrasan'ny firenena ny krizy ara-toekarena ratsy indrindra hatramin'ny fahaleovantena tamin'ny 1991.
Tamin'ny taona 2019, Portugal dia nahazo mpizahatany anglisy 2 tapitrisa miaraka amin'i Algarve 64 isan-jato. Tamin'ity taona ity, hatramin'izao, 92,000 231 monja ny Brits no efa nitsidika ny morontsiraka, namela ny mpividy tsy hanana mpanjifa, ary ny seza amoron-dranomasina no banga. Miankina amin'ny fizahan-tany ny faritra ary ny isan'ny tsy an'asa dia nitombo 8,000 isan-jato, nitombo hatramin'ny 26,000 ka hatramin'ny XNUMX ny olona.
Greece, misokatra amin'ireo mpitsidika vahiny hatramin'ny volana jona, ireo tetikasa izay ny fizahantany dia ho ambany 25 isan-jato noho ny 2019 (mpitsidika 33 tapitrisa). Ity firenena ity dia nanokatra ny sisintanin'ny sambo fitsangantsanganana hatramin'ny 1 Aogositra 2020 miaraka amin'ny fanantenana ny hamerenana indray ny vola miditra amin'ny fizahan-tany.
Amin'ny maha mpampiasa lehibe manerantany azy, asa 1 amin'ny 10 no mifandraika mivantana amin'ny fizahan-tany, (UNWTO 2020) ary mpamatsy harinkarena faobe ho an'ny firenena maro, ny fizahantany no ivon'ny toekarena. Mampalahelo fa ny fampitam-baovao sasany momba ny areti-mandringana dia tsy nanome ny fijerin'ny 360 ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany ho an'ny olana ary (diso) mifantoka amin'ny politika, governemanta ary ireo tondro ara-toekarena hafa (izany hoe ny varotra, ny banky ary ny fampiasam-bola), tsy miraharaha ny zava-misy nahatonga ny fizahan-tany, ary manohy manampy amin'ny fanitarana ny virus manerana ny sisin-tany.
Tsy safidy ny tsy fahombiazana
Ao anatin'ny indostria dia toa misy ny marimaritra iraisana fa tsy misy fomba fiverenan'ny indostria amin'ny toetrany taloha; na izany aza, misy fampahalalana mivaingana kely atolotra momba izay mety / tokony hatao hamerenana amin'ny laoniny ny hotely hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany. Raha tsy misy drafitra lalao - tsy misy fanantenana firy amin'ny ho avy.
Fanekena ny fizahantany ho anisan'ny olana
Ny firafitry ny fizahan-tany no mamela sy manafaingana ny fielezana sy ny fiantraikan'ny COVID-19 manerantany. Ny aretina ankehitriny dia tsy "iray miala", fa ampahany amin'ny indostrian'ny fizahantany. Ny aretina dia nivoatra sy nivelatra tamin'ny alàlan'ny fifandraisana misy eo amin'ny tanàn-dehibe, ny fanatontoloana, ny fanovana ny tontolo iainana, ny fambolena, ny fivavahana ary ny kapitalisma.
Niitatra tamin'ny alàlan'ny dia (fizahan-tany) ny aretina. Manana tontolo mifandraika isika izay ifampizarantsika ny fandotoana, ny fako, ny toetrandro ary koa ny fampandrosoana ara-toekarena manerantany, nasionaly sy isam-paritra, miampy ny soatoavina sy ny laharam-pahamehana amin'ny fanapaha-kevitra izay misy fiantraikany amin'ny politika sy ny politika. Amin'ny sehatra manerantany dia mifamatotra ny rafitray rehetra (biolojia, ara-batana ary ara-toekarena). Ny zava-mitranga amin'ny faritra iray amin'ny planeta dia misy akony amin'ny faritra maro amin'ny tany. Ny fanapahan-kevitra noraisina tany Etazonia dia nandalo tany Brezila, Arzantina ary, tamin'ny farany, ny planeta iray manontolo.
Ny valiny momba ny COVID-19 dia nisy fiantraikany - tsy nataon'ny mpahay siansa sy ny matihanina amin'ny fahasalamana, fa ny governemanta, ny andrim-panjakana, ny orinasa ary ny olona manana tombontsoa manokana. Noho ny fomba fiasa mitovy amin'ny silo amin'ny areti-mifindra, ny virus, tsy manaiky politika na sisin-tany, dia mifikitra amin'ireo mpifaninana akaiky indrindra nefa tsy miraharaha ny harena, firazanana na fivavahana. Ny vokany dia ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy sisa tavela mitsabo ny soritr'aretin'ny aretina ary tsy afaka mamono ny fakany.
Hanjavona Izy io
Nilaza ny filoha Donald Trump fa mino izy fa “hanjavona fotsiny” ny coronavirus ary nisy fiantraikany tamin'ny orinasa, fanabeazana, famokarana, varotra iraisam-pirenena ary fitsaboana io teoria io.
Ny fanapaha-kevitra hitazomana ny fitohizan'ny asa sy ny asa, ny famerenana ary ny fiverenana amin'ny paradigma taloha momba ny fahombiazana ara-toekarena sy ny fitomboana dia natosiky ny politikam-panjakana sy ny fomba fanao (izany hoe ny fanampiana, fanampiana amin'ny hetra), miaraka am-pitolomana amin'ny tombontsoa manokana, (izany hoe ny sambo fitsangantsanganana ). Ny tsy hita amin'ity scenario ity dia ny fandinihana na fifanakalozan-kevitra momba ny fanamafisana maharitra ny fanapahan-kevitra. Ny fifantohana ara-politika sy ara-orinasa dia mifototra amin'ny famerana fialan-tsasatra amin'ny fanokafana indray sy fanombohana toekarena amin'ny fandaniam-bolan'ny ain'olona miaraka amin'ny fandavana ny hijery paikady sy paikady hafa mety hitarika amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena.
Satria ny làlambe mpiambina an'i Etazonia napetraky ny governemanta teo aloha dia nesorin'ny mponina ao amin'ny White House ankehitriny, ary ny fitantanana ny fitondrana dia tsy fitaovana hanehoana valiny mahomby, mandaitra na manan-tsaina manoloana ny virus, ny olona dia niditra tamin'ny fividianana fikorontanana ary fanjifana tafahoatra ny fomba fanao amin'ny Internet (izany hoe fialamboly virtoaly, famatsiana sakafo sy zava-pisotro). Ny fanidiana farany (fa ilaina tanteraka) dia nampitombo ny tsy fahatokisan'ny mpanjifa ary mihombo ny tahotra satria manjavona ny fomba fiaina mahazatra an'ny mpanjifa, tapa-kevitra fa ilaina amin'ny fahasambarana sy fahombiazana.
Miezaka ny maminavina sy mandrefy ny fandinihana ny fotoana hamerenana ny fizahantany, ary rahoviana no hahatratra ireo refy momba ny fizahan-tany. Mihazakazaka ny governemanta mba hampihenana ny fatiantoka ara-toekarena ary ho voalohany hanokatra sisin-tany ary hamerina ireo mpizahatany, tsena ara-bola, mpampiasa vola ary vola azo tsapain-tanana, nefa hitany fa miverina amin'ny valifaty ilay viriosy. Tsy mitady valiny amin'ny zava-misy ankehitriny na ho avy ny indostria; fa kosa, mitady ny valiny "mahatsapa tsara" izy ireo hanamafisana ny modely efa lany andro, lany andro ary tsy misy ilana azy.
Fizahan-tany amin'ny ho avy?
Mety ity no fotoana mety hametrahana fanontaniana ary hanovana ny paradigma momba ny fizahantany aza ary hanombatombana ny fomba fijery, fampiharana ary fitantanana azy. Maninona no raisina ho toy ny fomba ialana, fialan-tsasatra ary fiaraha-miasa ity; manangana mombamomba sy toerana vaovao; ho valisoa; fialan-tsasatra amin'ny fahazarana amin'ny fiainana tsy misy dikany na mahafa-po? Fa maninona ny olona no manapa-kevitra ny handeha kilometatra an'arivony maro avy any an-trano mba ho (na hahazo indray) ny fahatsapana fa "faly?" Fa maninona no kolontsaina novolavolain'ny fizahan-tany, lasa "manintona" hahafaly ny mpizahatany ho fomba iray hitarika ny fitomboan'ny harinkarena?
Ny fizahantany dia tsy tokony hoheverina ho fandaniam-bola na zavatra tsy misy dikany ary artifisialy matetika. Ny fizahan-tany dia fampiasam-bola be saina ary tokony hifantoka amin'ny fampivelarana ireo loharano maharitra ary hivoatra miaraka amin'ny tanjon'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny faharetana fa tsy amin'ny fanararaotana.
Hizaha sehatra tsy miankina
Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny indostrian'ny fizahantany dia nanomboka nanaiky ny andraikiny tamin'ny famoronana ny areti-mandringana sy ny adiresy ny andraikiny, na dia ny fitadiavana vahaolana vetivety aza amin'ireo krizy eo no ho eo fa tsy ny fanatsarana maharitra.
Ireo orinasa ireo dia mamorona endrika tontolo iainana - namana mahafinaritra izay miainga amin'ny toeram-pisotroana divay ka hatrany amin'ny hetsika ivelany miaraka amin'ny fifantohana amin'ny vondrona tsy miankina na olon-tsotra na kely izay mitaky fanalavirana ara-tsosialy sy firakofana. Mpiara-miasa fizahan-tany vitsivitsy no nanatsara ny fomba fidiovana amin'ny fanarahana fenitra vaovao mifototra amin'ny toro-hevitra avy amin'ny mpanolo-tsaina ara-pitsaboana / hopitaly. Ny orinasa sasany aza mametraka ny volany any amin'izay mety hanampiana azy ireo - miditra an-davaka amin'ny lavaka tsy hita noanoa amin'ny lamba sy habaka fanoherana mikraoba ary manatsara ny rafitry ny HVAC.
Ny trano fisakafoanana, hotely, seranam-piaramanidina ary habaka ho an'ny daholobe dia endrika tontolo iainana, izay mahatonga azy ireo tsy hifandray sy / na hampiditra robot. Ny fampiharana finday dia ampiasaina amin'ny famandrihana, fidirana / fidirana, fidirana amin'ny efitrano, fandoavam-bola nomerika ary fividianana serivisy, fialamboly ary famandrihana hetsika. Ny teknolojia New Covid-19 dia afaka miantoka ny haben'ny vahoaka sy ny fitantanana amin'ny hetsi-bahoaka, seranam-piaramanidina, toeram-pivarotana, tranombakoka ary hotely.
Ny famerenana maharitra ny fizahan-tany dia mitaky pivot avy amin'ny traikefa hedonic sy sensorial be izay misy lanjany lehibe, ho an'ny indostria misy dikany sy fananana, manolo ny fofon'ny fofona ho an'ny fahadiovana; ny lanjan'ireo fanalavirana sosialy sy ny fifandraisan'ny tsirairay fa tsy ny fifantohana amin'ny vondrona; ny fampiasana feo "anaty" fa tsy ny firohondrohon'ny vahoaka.
Mila jerena indray ny andraikitry ny governemanta amin'ny fizahantany. Any Karaiba, navelan'ny governemanta handehandeha ny ranomasimbe sy ny oniny, handrava ny morontsiraka ary hanangana trano fandraisam-bahiny tsy misy fijerena ny fitehirizana sy ny tombotsoan'ny fiarahamonina. Any Azia, nafindra toerana ireo tanàna manodidina mba hampihena ny fotoana manomboka amin'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny hotely afovoan-tanàna. Any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, ny ankizy dia voarohirohy manoloana ny mpizahatany, mangataka pensilihazo, taratasy ary boky satria tsy mahazaka ny fanabeazana fototra ny toekarena eo an-toerana. Ireo fihetsika rehetra ireo dia ampiharina tsy misy resaka na fanekena mialoha avy amin'ny olom-pirenenan'ireo firenena ireo.
Fiaraha-miasa amin'ny daholobe / tsy miankina
Amin'ny fotoana fohy dia hihena ny areti-mandringana ankehitriny; na izany aza, misy hafa miandry eo an-elany. Ny indostrian'ny fizahantany dia manohy manatsara ny fanitarana io aretina io ary tsy manaiky tanteraka ny anjara asany.
Ny famerana ny dia dia fomba iray hanakanana ny fihanaky ny areti-mandringana; na izany aza, ity fomba fanao ity dia mety hiteraka fahavoazana bebe kokoa noho ny soa amin'ny fanakanana ny fizarana info, ny rojom-pitsaboana ary ny toekarena manimba, hoy ny sekretera jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, Tedro Adhanom Ghebreyesus. Dr. Eric Toner, manam-pahaizana zokiolona ao amin'ny John Hopkins Center for Health Security dia nahita fa ny governemanta amin'ny farany, "… manandrana manao zavatra izay misy tombony kely nefa tena manimba. Naseho hatrany hatrany fa ny fametrahana sakana amin'ny fivezivezena dia tsy mampiato ny areti-mifindra. "
Fotoana izao hijeren'ny indostria ny olana ary hanamboatra ny simba, hisolo izay tsy azo atao intsony amin'ny indostria vaovao, salama ary mavitrika. Araka ny nolazain'i Hillel the Elder (110 al.fi), "Raha tsy izao dia rahoviana."